ရော်နယ်ဒိုနဲ့ FA ဖလားယူမှာဆို? လုပ်ပါဦး ဆရာကြီးလို့ ကာရေဂါ စပါယ်ရှယ်လေတိုက် | Duwun
ရွိုင်ကိန်းရော၊ ရော်နယ်ဒိုရောကို နေစရာမရှိအောင် ကာရေဂါက လှောင်ပြောင်ခဲ့တာပါ။
လီဗာပူး ဂန္တဝင်ကစားသမားဟောင်းကြီး ကာရေဂါက ယူနိုက်တက်နဲ့အတူ ရော်နယ်ဒိုက အက်ဖ်အေဖလားတော့ ဆွတ်ခူးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ရွိုင်ကိန်းရဲ့ တချိန်က ပြောစကားကို အစဆွဲထုတ် လှောင်ပြောင်ခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ဟာ မနေ့ညက မစ်ဒယ်ဘရော့ကို ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့နောက် အက်ဖ်အေဖလား စတုတ္တအဆင့်ကနေ ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီပွဲအပြီးမှာပဲ ကာရေဂါက “ရွိုင်ကိန်းက ကျနော့်ကို ပြောဖူးတယ်ဗျ။ ယူနိုက်တက်က ရော်နယ်ဒိုကို ခေါ်တာ အက်ဖ်အေဖလားရဖို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ဖလားတွေ၊ ဖလားတွေ.... အက်ဖ်အေဖလားနော်။ ရွိုင်ကိန်းကိုတော့ ဆန်းဒါးလန်းမသွားဖြစ်ဖို့ ကျနော်မျှော်လင့်ပါတယ်” လို့ သူ့ရဲ့ တွစ်တာကတဆင့် အကြီးအကျယ် လှောင်ပြောင်ခဲ့ပါတယ်။
ရော်နယ်ဒို ယူနိုက်တက်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာချိန်မှာ ရွိုင်ကိန်းက “ရော်နယ်ဒို ယူနိုက်တက်မှာ အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုယူနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ ကာရေဂါက “ဒါဆို သူ့ကို ဘာလုပ်ဖို့ ပြန်ခေါ်တာလဲ? အခု သူ့အသက်က (၃၆) နှစ်နော်။ (ဒီနေ့မှာတော့ ရော်နယ်ဒို (၃၇) နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါပြီ)” လို့ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ရွိုင်ကိန်းကလည်း “ရော်နယ်ဒိုက ချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ အက်ဖ်အေဖလားအတွက် ပြန်ရောက်လာတာပါ။ အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဆုဖလားတွေ၊ ဆုဖလားတွေအတွက်။ အဲ့ဒီအတွက် ရော်နယ်ဒို ယူနိုက်တက်ကို ပြန်ရောက်လာတာပေါ့” လို့ ပြောကြားသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ဟာ မနေ့ကရှုံးပွဲပြီးတဲ့နောက် အင်္ဂလန်ပြည်တွင်းဖလားအားလုံးကို လက်လွှတ်ခံရပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်မှာတော့ ယူနိုက်တက်တို့ ရှုံးထွက် (၁၆) သင်းအဆင့်ကို ရောက်ရှိနေပြီး စပိန်လာလီဂါကလပ် အက်သလက်တီကိုနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံနေပါတယ်။